Stainless Steel Tactile rinoparadza, Brass Tactile panhengo, Bronze Tactile dzinovhunura - JBP
Tiri boka JBP BOKA (HK) CO webazi., KUSATSIGIRWA. With makore anopfuura 16 akapfuma ruzivo mukuita tactile pasi pose zviratidzo uye dzimwe CNC machine psac simbi zvigadzirwa. musika yedu chikuru chinoenda kuburikidza Australia, New Zealand, Japan, USA, Germany, France nedzimwe nyika dzokuEurope. Tiri inopiwa ne yemhando michina uye yedu anokwanisa michina vashandi kunovimbisa isu yakakwirira yakati R & D kugona.
Material mishonga yedu inosanganisira: Marine Grade Stainless simbi, nendarira, mhangura, aruminiyamu, zingi chiwanikwa uye zvakatipoteredza ushamwari rabha uye epurasitiki.
The predominance kuti fekitari yedu nhema sezvinotevera:
1, Tine makore 16 'zvazvakanakira mukugadzira zvikamu simbi pamwe achitungamirira R & D kugona. misika yedu huru vari Europe, North America, Australia uye Asia. Tinogona kupa mhando zvigadzirwa maererano nemitemo yomunzvimbo nemitemo.
2, takanga pamwe multinationals akawanda simba kwemakore. Pane makore anopfuura 20 ruzivo wevanamakanika vanoziva zvakanaka pamusoro zvigadzirwa. Saka tinogona chokwadi kuti tinokwanisa kupa unhu zvigadzirwa yakavakirwa kutsanya pakusununguka.
3, The vanokwanisa mainjiniya ari fekitari kwedu kunogona kureva uye mazano zvimwe zvirongwa zvitsva-akagadzirirwa kana zvakakodzera. Tiri zvakanaka pamasikiro uye kuziva zvakanaka pamusoro pokushandisa yedu huru zvigadzirwa.
4, Tine imupota uye ekisipoti rezinesi.
5, Kune dzakawanda kugadzikana Sub-Contractors vanotibatsira zvimwe zvinhu kubva nezvimwewo.
fekitari Our riri Cixi, kumugumo wezasi Hangzhou Bay Bridge, kureva wakarebesa zambuko pamusoro pegungwa. Zviri mumwe uye hafu yeawa kubva Pudong Airport uye 1 awa kubva Xiaoshan Airport, hafu yeawa kubva Ningbo Airport kusvika fekitari yedu nemotokari chete. Kana uri kuuya kutishanyira, tapota nesu nokuti kunhonga.
Unofanira kuva chero mubvunzo, ndapota usazeza nesu.
TGSI-006 Stainless simbi tactile panhengo / warni ...
Rabha nhengo / rakaumbwa rabha nhengo / Kuumbwa kuti ru ...